Bitcoin လျှော့စျေးသော့ဖွင့်ဖို့အဆင့်များ -up, BitcoinEthereumNews.com
Bitcoin လျှော့စျေးသော့ဖွင့်ဖို့ Levels-Up ကို Twitch
အမေဇုံပိုင် streaming platform Twitch သည်၎င်း၏ crypto မဟာဗျူဟာကိုအရှိန်မြှင့်တင်နေသည်။ ဗီဒီယိုဂိမ်းကိုတိုက်ရိုက်လွှင့်ထုတ်ခြင်းအပေါ်အဓိကထားသောဆိုက်သည်ယခုဖြစ်သည် ပူဇော်သက္ကာကို အသုံးပြုသူများသည် platform ၏ငွေပေးချေမှုပရိုဆက်ဆာ BitPay မှတစ်ဆင့် cryptocurrency ဖြင့်ပေးဆောင်သည့်အခါ ၁၀% ကြေးပေးသွင်းမှုလျှော့စျေး။
BitPay ၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအရာရှိချုပ် Bill Zielke ကကုမ္ပဏီနှင့်အလုပ်လုပ်သောထောင်ပေါင်းများစွာသောကုန်သည်များအနက်မှ Twitch သည် crypto-based မြှင့်တင်ရေးကိုကမ်းလှမ်းသောပထမဆုံးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်ဟု Cointelegraph သို့ပြောကြားခဲ့သည် Zielke ကဆက်ပြောသည်။
“ crypto ကိုအရောင်းမြှင့်တင်ရေးပုံစံအဖြစ်အသုံးပြုရန်စိတ်ဝင်စားသောအွန်လိုင်းကုန်သည်များကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နေရပါတယ်။ ဒီအချက်ကစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စျေးကွက်ငွေပေးချေမှုစနစ်အများစုကို PayPal ကနေတစ်ဆင့်အခြားငွေပေးချေမှုများအတွက်သီးသန့်ထားရှိပါသည်။ […] Twitch သည်ဤလမ်းကြောင်းပေါ်သို့ ဦး တည်သောပထမဆုံးကုန်သည်ဖြစ်သည်။
Twitch သည် crypto ကိုစိတ်ဝင်စားမှုသည်ဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေပါသလား။
Zielke ၏အဆိုအရ Twitch သည် ၁၀% ကြေး ၀ ယ်ယူမှုလျှော့စျေးကိုပေးနေခြင်းဖြစ်သည်။ မှတ်သားရန်မှာအရေးကြီးသည်မှာအချို့သည်ပရိုမိုးရှင်းကမ်းလှမ်းမှုသည် BitPay မှလာသည်ဟုထင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ Twitch ကိုယ်တိုင်အရောင်းမြှင့်တင်ရေးကိုကမ်းလှမ်းနေခြင်းသည်အလွန်အံ့သြစရာကောင်းသည်။ streaming platform သည် crypto နှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိသည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ်မတ်လတွင် Twitch သည်၎င်း၏ Bitcoin ကိုဖယ်ရှားခဲ့သည်။BTC) နှင့် Bitcoin ငွေ (BCHစာရင်းသွင်းခြင်းအတွက်) ငွေပေးချေမှုရွေးချယ်စရာ။ Reddit အသုံးပြုသူတစ် ဦး ကပြောင်းလဲမှုကိုအစီရင်ခံသည် Twitch သည် BitPay အားငွေပေးချေမှုပရိုဆက်ဆာအဖြစ်ရုတ်တရက်ဖယ်ရှားခဲ့သည်။ အခြား Reddit အသုံးပြုသူတစ် ဦး က Twitch သည်ဤအချိန်အတွင်းသူတို့၏ crypto-based subscriptions များအားလုံးကိုဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။ သုံးလအကြာတွင် Twitch ပြန်ဖွင့် crypto ငွေပေးချေမှု options များ.
2019 ခုနှစ်တွင် Twitch ၏ Twitch ၏ရုတ်တရက်နှလုံးပြောင်းလဲမှုအကြောင်း Zielke ကမှတ်ချက်မပေးနိုင်သော်လည်း Twitch က crypto အသုံးပြုသူများကိုပလက်ဖောင်းတွင်ပိုမိုဆွဲဆောင်လိုသည်မှာသူဖော်ပြခဲ့သည်။ Twitch ကဲ့သို့ကြီးမားသောကုမ္ပဏီတစ်ခုသည်၎င်း၏ဖောက်သည်အားလုံးအတွက် cryptocurrency-based ပရိုမိုးရှင်းကိုကမ်းလှမ်းသောအခါ၎င်းသည်သူတို့နှင့် ပတ်သက်၍ အလေးအနက်ထားကြောင်းရှင်းလင်းသောသတင်းစကားတစ်ခုပေးသည်။
ထို့အပြင် Twitch သည် crypto ကိုစိတ်ဝင်စားမှုသည်တီထွင်မှုမှဖြစ်ပေါ်လာသည်ဟုယုံကြည်စေနိုင်သည် blockchain-based ဂိမ်းများ၏လူကြိုက်များတိုးပွားလာ နှင့် virtual world မှာဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများအသုံးပြုခြင်း။ ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ Twitch သည်အဓိကအားဖြင့်ဂိမ်းအသိုင်းအဝိုင်းကိုအဓိကထားသည်ကိုထောက်ပြရန်အရေးကြီးသည်။ နောက်ထပ်လတ်တလောစာရင်းဇယား ပြသ ဇူလိုင်လအစောပိုင်းတွင် Twitch ၌ဂိမ်းပေါင်း ၁၆၀၀၀ ကျော်ကစားခဲ့ကြပြီး၎င်းသည်စင်မြင့်အတွက်အချိန်ကုန်ဆုံးမှုနှင့်နီးစပ်ပုံရသည်။
Blockchain-based ဂိမ်းများအတွက်ပလက်ဖောင်းဖြစ်သော DMarket အတွက်ဂိမ်းရှေ့ဆောင်နှင့်လွတ်လပ်သောဘုတ်အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ဖြစ်သည့် Trip Hawkins က Cointelegraph သို့ပြောကြားရာတွင် crypto သည်လာမည့်နှစ်များအတွင်းပိုမိုတိုးတက်လာမည်ဟုယုံကြည်သည်၊ ဂိမ်းနှင့်ဆိုင်သောဝန်ဆောင်မှုများ:
“ အားကစားဟာ virtual world တွေပါ။ virtual world တွေအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနဲ့ငွေပေးချေမှုစနစ်ကအကျိုးရှိတယ်။ ၎င်းတို့သည် crypto အားလူသိများသောပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ခြေရာခံယန္တရားများမှအကျိုးကျေးဇူးရရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ကုန်သည်များသည်၎င်းသည်မတည်ငြိမ်သောကိရိယာတစ်ခုမဖြစ်သရွေ့ crypto ကိုကမ်းလှမ်းချင်ကြလိမ့်မည် (ထိုအကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကြိမ်ပေါင်းများစွာလာပြီးသွားသည်ကိုတွေ့ရသည်)”
Hawkins ကထပ်မံပြောကြားသည်မှာ livestreaming platform များကျင့်သုံးနေသည့်နောက်လမ်းကြောင်းတစ်ခုမှာ crypto ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် MenaPay ၏မိုဘိုင်းငွေပေးချေမှု ၀ န်ဆောင်မှုကိုထောက်ခံကြောင်းကြေငြာခဲ့သည် ယင်း၏ MenaCash stablecoin သုံးပြီး Tipping Twitch။ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုမရှိသောအင်တာနက် browser ကို Brave လည်း YouTube နှင့် Twitch နှစ်ခုစလုံးအတွက်အထောက်အပံ့ပေးသည်.
DMarket ၏တည်ထောင်သူနှင့်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဖြစ်သူ Vlad Panchenko ကလည်း Twitch သည်မျိုးဆက်သစ်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းကိုကစားသမားများသာမကအခြားအားကစားလုပ်ငန်းကဲ့သို့သောအခြားဖျော်ဖြေရေးကဏ္forများအတွက်တည်ဆောက်ခြင်း၊ Twitch ၏ပရိသတ်နှင့်အလုံးစုံထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုတည်ဆောက်နေသည်ဟုယုံကြည်ကြောင်း Cointelegraph သို့ပြောကြားခဲ့သည် ဒါကဂိမ်းကုမ္ပဏီတွေဟာသူတို့ရဲ့ကမ်းလှမ်းချက်ကို cryptocurrency နဲ့ပြန်လည်နေရာချထားခြင်းနှင့်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်းအားဖြင့်အနာဂတ်ကိုကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်နိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ "
Hawkins ကထပ်မံထောက်ပြသည် မတ်လအတွက် cryptocurrency စျေးကွက်ပျက်ကျမှု, crypto စျေးနှုန်းများပြန်လည်ကောင်းမွန်နှင့်တည်ငြိမ်ပါပြီ။ ထို့ကြောင့် crypto ကိုအွန်လိုင်းကြေးပေးသွင်းခြင်းအတွက်အသုံးပြုခြင်းသည်ယခုအခါအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သည်။ ဟော့ကင်းကိုပဲ့တင်ထပ်လျက်, Twiel မှကမ်းလှမ်းသော cryptocurrency-based မြှင့်တင်ရေးသည်ရဲရင့်သောအပြုအမူဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်ပိုမိုကြီးမားသောလမ်းကြောင်းကိုပြသသည်။ crypto-based ငွေပေးချေမှုကိုရှာဖွေနှင့်လက်ခံသည်.
Zielke ၏အဆိုအရ BitPay သည် Crypto ငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံသောအခါကုန်သည်များမှရရှိနိုင်သောအကျိုးကျေးဇူးများကိုပြသရန် Forrester Consulting မှလေ့လာမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ လေ့လာမှုကိုမထုတ်ပြန်ရသေးသော်လည်း Zielke မှတွေ့ရှိချက်အချို့ကိုမျှဝေနိုင်ခဲ့သည်။
crypto ကိုလက်ခံခြင်းသည်ပိုမိုမြင့်မားသောပျှမ်းမျှအမှာစာတန်ဖိုးများကိုရရှိပြီးမကြာခဏ ၂.၂.၅ ဆပိုမိုများပြားကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ Crypto ကိုလက်ခံခြင်းသည်သုံးစွဲသူများ၏အစိတ်အပိုင်းသစ်များကိုဆွဲဆောင်ပြီးငွေပေးချေမှုကုန်ကျစရိတ်ကိုလျော့နည်းစေကြောင်းကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင် crypto ကိုလက်ခံသည့်ရိုးရာလစာနှုန်းထား၏ထက်ဝက်ခန့်သည်လိမ်လည်မှုနှင့်ပတ်သက်သော chargebacks များကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ခဲ့သည်။
ဥရောပပရိဘောဂ e-commerce ဆိုက် Beliani ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Stephan Widmer ကပြောကြားရာတွင် crypto ဖြင့်ငွေပေးချေသည့်အခါဖောက်သည်များသည်ယူရို ၁၀၀ (လက်ရှိဒေါ်လာ ၁၁၆ ဒေါ်လာ) နှင့်ဝယ်ယူမှုမှယူရို ၁၀၀ (လက်ရှိဒေါ်လာ ၁၁၆ ဒေါ်လာ) ကိုဝယ်ယူသောကုမ္ပဏီသည်ယခင်က BitPay နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်ဟု Cointelegraph သို့ပြောကြားခဲ့သည်။ ။ သူကမြှင့်တင်ရေး၏နောက်ကွယ်ရည်ရွယ်ချက်မှာပိုမိုမြင့်မားသောအမှာစာများမှရောင်းအားတိုးမြှင့်နေစဉ်ဖောက်သည်အသစ်တစ်ခုကိုဆွဲဆောင်ရန်ဖြစ်ကြောင်းသူကရှင်းပြသည်။ Widmer ၏အဆိုအရစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးမှရရှိသောရလဒ်များအရခရက်ဒစ်ကဒ်ရောင်းရငွေနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပျမ်းမျှအမှာစာတန်ဖိုးမှာနှစ်ဆပိုများကြောင်းပြသသည်။
Related: Crypto Payment Option ကိုစတင်မိတ်ဆက်ရန်အကြီးမားဆုံးကော်ပိုရေးရှင်းများသံသယရှိသည်
ဤတွေ့ရှိချက်များသည်ငွေပေးချေမှုလုပ်ငန်းတွင် cryptocurrency လက်ခံမှုအတွက်ကြီးမားသောတိုးတက်မှုများကိုညွှန်ပြနိုင်သော်လည်း စိန်ခေါ်မှုများစွာရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ crypto သည်လက်လီရောင်းဝယ်သူများအတွက်နိုင်ငံခြားအယူအဆတစ်ခုဖြစ်နေဆဲဖြစ်ပြီးအများစုက၎င်းကိုရှောင်ရှားစေနိုင်သည်။ ထို့အပြင် crypto နှင့်ဆက်စပ်မတည်ငြိမ်မှုကုန်သည်များအတွက်ပြaticနာဖြစ်နိုင်သည်။ Uphold ၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုပလက်ဖောင်းအတွက်ဒုတိယဥက္ကpresident္ဌ Michelle O'Connor ကပြောကြားရာတွင် cryptocurrency ငွေပေးချေမှုများကိုခေတ်မှီသောမွေးစားမှုရရှိစေရန်လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်ချက်များရှိနေသေးကြောင်း Cointelegraph သို့ပြောကြားခဲ့သည်။ O'Connor က
“ Crypto လုပ်ငန်းကိုလေ့လာပြီးလွန်ခဲ့သော ၆-၁၂ လအတွင်းရထားလမ်းကိုထင်မြင်ချက်မှမွေးစားခြင်းအထိကူးပြောင်းနိုင်ရန်တိုးတက်မှုများကိုသင်ကြည့်လျှင်ကောင်းလိမ့်မည်။ သို့သော်သွားရန်နည်းလမ်းများနှင့်တိုးတက်မှုများရှိသေးသည်။ cryptocurrency တွင်မည်ကဲ့သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရမည်ကိုဆုံးဖြတ်ရာတွင်စခန်းနှစ်ခု၊ hodlers နှင့်စားသုံးသူများရှိသည်။ မကြာသေးမီအချိန်အထိသုံးစွဲသူများအနေဖြင့်၎င်းတို့၏ crypto ကိုဖြုန်းရန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းများသို့မဟုတ်မှန်းဆမှုများနှင့်စျေးကွက်တည်ငြိမ်မှုများကြောင့်သုံးစွဲရန်မဝံ့မရဲဖြစ်နေသည်။ ”
အထူးသဖြင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည်ဒေါ်လာတန်ဖိုးကျဆင်းသွားသည်နှင့်အမျှအိုပိုကော်ပိုရေးရှင်းသည် crypto အသုံးစရိတ်များနှင့် ပတ်သက်၍ တွန့်ဆုတ်သွားသည်ဟုမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ ထို့အပြင် cryptocurrency ငွေပေးချေမှုနှင့်ဆက်စပ်အကျိုးကျေးဇူးများကုန်သည်များနှင့်နားလည်သဘောပေါက်ရန်စတင်နေကြသည် MasterCard နှင့်တူသောအဓိကခရက်ဒစ်ကဒ်ပံ့ပိုးသူများ။ ကုန်သည်အခကြေးငွေများ၊ အခြေချချိန်များနှင့်ပြန်လည်ပေးဆပ်ရမည့်အန္တရာယ်များကိုဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်လက်ရှိလက်ခံထားသောငွေပေးချေမှုပုံစံကိုကြည့်ပြီး crypto ကမ္ဘာသို့ဖွင့်လှစ်သင့်သည်။
ရင်းမြစ် - https://cointelegraph.com/news/streams-of-excitement-twitch-levels-up-to-unlock-bitcoin-discount
Tags: Bitcoin, လျှော့စျေး, LevelsUp, Twitch, သော့ဖွင့်
RPT-COLUMN-Tesla အကြီးအကဲ Musk သည်နီကယ်ကိုပိုမိုလိုချင်သည်က starter မဟုတ်သော Andy Home